ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ - Barnyar Barnyar
March 16, 2022 KNOWLEDGE 0
၁. သငျ့ ဦးနှောကျထဲမှာ ရငျနှီးမွှုပျနှံပါ။
စာဖတျတဲ့ အကငျြ့လေး စလုပျပါ။ သငျ့ပညာရေး ဒါမှမဟုတျ သငျ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ စာတှေ၊ ဗီဒီယိုတှကေို ကွညျ့ရှုပါ။ အထူးသဖွငျ့ သကျဆိုငျရာ နယျပယျက ထူးခြှနျသူတှရေဲ့ အတှေးအချေါနဲ့ အယူအဆတှေ ဆီကနေ သငျယူမှု ပွုလုပျပါ။
၂. သငျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ။
လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပါ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာတှကေိုသာ (တတျနိုငျသလောကျ) စားသုံးပါ။ ရမြေားမြားသောကျပါ။ ဆေးလိပျ၊ အရကျသစောနဲ့ မူးယဈဆေးဝါးတှကေို ရှောငျကွဉျပါ။ ဒီရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဟာ သငျ့ဘဝမှာ အလဟသဆုံးရှုံးသှားတဲ့ အခြိနျတှကေို အသကျရှညျခွငျးနဲ့ အခြိနျပှားယူခွငျး တဈမြိုးလဲ ဖွဈတယျ။
၃. သငျ့ အနာဂါတျအတှကျ စီးပှားရေးအရ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ။
ငှကေို တတျနိုငျသလောကျ စုပါ။ စုထားရုံနဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု မဖွဈသေးပါဘူး။ စုထားတဲ့ ငှကေနေ အကြိုးအမွတျရစဖေို့ အရငျးအမွဈ ခိုငျမာတဲ့ စီးပှားရေး တဈခုမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံထားပါ။
၄. သငျ့ကလေးရဲ့ အနာဂါတျအတှကျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ။
၂၀၀၁ခုနှဈ နောကျပိုငျး ပွုလုပျထားတဲ့ သုသသေနတှအေရ သာမာနျ ကလေးဆိုတာ မရှိပါဘူးတဲ့။ ကလေးတဈယောကျ စီတိုငျးမှာ ပုံမှနျထကျ တဈနရောရာမှာ ပို ထူးခြှနျနတေတျတယျ။
ဒါကို မိဘက သခြောသတိထားကွညျ့ဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကလေးရဲ့ အနာဂါတျအတှကျ သူထူးခြှနျတဲ့ နယျပယျကို ရှာဖှဖေျောထုတျပွီး အစီအစဉျတကြ ရငျးနှီးမွှုပျနှံထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၅. မိမိကိုယျတိုငျအတှကျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ။
ဘဝမှာ ငှဟော အရေးပါတယျ ဆိုပမေယျ့ အမွဲတမျးအတှကျတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကနျြးမာရေးကောငျးနတေဲ့ အခြိနျမှာ ခရီးတှထှေကျပါ။ ပတျဝနျးကငျြ အသဈတှကေနေ အတှအေ့ကွုံ အသဈတှေ ရယူပါ။
မတူညီတဲ့ လူတနျးစားပေါငျးစုံ၊ လူမြိုးပေါငျးစုံဆီမှာ မတူညီတဲ့ ဗဟုသုတတှေ၊ မတူညီတဲ့ ဘဝပေး အတှအေ့ကွုံတှေ ရှိနတေယျ။
ဘဝဆိုတာ အခနျးကဉျြးလေးထဲ၊ အသိုငျးအဝိုငျး ကဉျြးကဉျြးလေးထဲမှာ ရှိသမြှ အခြိနျတှကေို အလုပျတှနေဲ့ ပိပွီး ကုနျဆုံးသှားလောကျရအောငျတော့ အဓိပ်ပာယျ မဲ့မနသေငျ့ပါဘူး။
#Credit photo and original uploader
၁. သင့် ဦးနှောက်ထဲမှာ ရင်နှီးမြှုပ်နှံပါ။
စာဖတ်တဲ့ အကျင့်လေး စလုပ်ပါ။ သင့်ပညာရေး ဒါမှမဟုတ် သင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုပါ။ အထူးသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်က ထူးချွန်သူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အယူအဆတွေ ဆီကနေ သင်ယူမှု ပြုလုပ်ပါ။
၂. သင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကိုသာ (တတ်နိုင်သလောက်) စားသုံးပါ ။ရေများများသောက်ပါ။ ဆေးလိပ်၊ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ သင့်ဘဝမှာ အလဟသဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အချိန်တွေကို အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ အချိန်ပွားယူခြင်း တစ်မျိုးလဲ ဖြစ်တယ်။
၃. သင့် အနာဂါတ်အတွက် စီးပွားရေးအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
ငွေကို တတ်နိုင်သလောက် စုပါ။ စုထားရုံနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဖြစ်သေးပါဘူး။ စုထားတဲ့ ငွေကနေ အကျိုးအမြတ်ရစေဖို့ အရင်းအမြစ် ခိုင်မာတဲ့ စီးပွားရေး တစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါ။
၄. သင့်ကလေးရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
၂၀၀၁ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ပြုလုပ်ထားတဲ့ သုသေသနတွေအရ သာမာန် ကလေးဆိုတာ မရှိပါဘူးတဲ့။ ကလေးတစ်ယောက် စီတိုင်းမှာ ပုံမှန်ထက် တစ်နေရာရာမှာ ပို ထူးချွန်နေတတ်တယ်။
ဒါကို မိဘက သေချာသတိထားကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် သူထူးချွန်တဲ့ နယ်ပယ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး အစီအစဉ်တကျ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၅. မိမိကိုယ်တိုင်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
ဘဝမှာ ငွေဟာ အရေးပါတယ် ဆိုပေမယ့် အမြဲတမ်းအတွက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးကောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ခရီးတွေထွက်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် အသစ်တွေကနေ အတွေ့အကြုံ အသစ်တွေ ရယူပါ။
မတူညီတဲ့ လူတန်းစားပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံဆီမှာ မတူညီတဲ့ ဗဟုသုတတွေ၊ မတူညီတဲ့ ဘဝပေး အတွေ့အကြုံတွေ ရှိနေတယ်။
ဘဝဆိုတာ အခန်းကျဉ်းလေးထဲ၊ အသိုင်းအဝိုင်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ရှိသမျှ အချိန်တွေကို အလုပ်တွေနဲ့ ပိပြီး ကုန်ဆုံးသွားလောက်ရအောင်တော့ အဓိပ္ပာယ် မဲ့မနေသင့်ပါဘူး။
Total Hits : 336017